भोलिदेखि बैदेशिक रोजगारको पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट | सुदुरपश्चिम खबर
भोलिदेखि बैदेशिक रोजगारको पुनः श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट
धारिलो हतियार प्रहार गरी एक युवकको हत्या !!
सरकारले शुक्रबारदेखि बैदेशिक रोजगारको पुनः श्रम स्वीकृति (श्रम स्वीकृतिको नविकरण) अनलाइन मार्फत नै वितरण गर्ने भएको छ । बैदेशिक रोजगार बिभागले नयाँ बर्ष सन् २०२१ जनवरी १ तारिखबाट यो सेवा सुचारु गर्न लागेको हो ।
योसँगै भोलि (शुक्रबार) देखि बैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली कामदारले कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो श्रम स्वीकृति नविकरण गर्न सक्नेछन् । बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले बिभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर जानुपर्ने हुन्छ ।
उक्त श्रम स्वीकृतिको अवधी भने २ बर्षको हुन्छ । त्यसपछि सोही मुलुकमा नै काम गर्न त्यसको नविकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यो श्रम स्वीकृति नविकरण गर्न कामदारलाई नेपालमा नै आउनुपर्ने बाध्यता थियो ।
तर, अब भने विश्वको कुनै पनि मुलुकबाट कामदारले आफ्नो श्रम स्वीकृति नविकरण गर्न सक्ने बिभागको भनाइ छ । विदामा नेपाल आएका तथा विदेशमा नै रहेका कामदारले अनलाइन मार्फत यो सुविधा लिन सक्ने छन् ।
हाललाई पुनः श्रम स्वीकृतिको लागि मात्र यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । निकट भविष्यमा नयाँ श्रम स्वीकृतिलाई पनि अनलाइन प्रणालीमा लैजाने बिभागले बताएको छ ।
अनलाइन पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपूर्व कामदारले म्यादी जीवन बीमा र कल्याणकारी कोषको रकम भने भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम भुक्तानी गर्न पनि अनलाइनबाट नै सकिने छ ।
इ–सेवा, खल्ती जस्ता अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गरिएको बिभागको भनाइ छ । उक्त रकम भुक्तानी भएपछि कामदारले बिभागको वेवसाइटमा रहेको अनलाइन श्रम स्वीकृति सिस्टमा गएर आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यसपछि बिभागले कामदारको इमेलमा नै पुनः श्रम स्वीकृतिको स्टीकर पठाउने छ ।
सपनामा मृ त्यु भइसकेका मानिस देखे के हुन्छ ?
अमेरिकामा एकैदिनमा तीन हजार संक्रमितको मृत्यु